Nzuzo maka ihe ubi na-aga nke ọma na-abịa n'ụlọ - Ọkụ ghari - 2020
Otu esi echekwa cleavia n'ime ulo
Clivia, ma ọ bụ Kaffir Lily bụ nke ezinụlọ Amaryllis. A na-achọta okooko osisi ndị a dị na ọhịa n'ókèala South Africa, taa, ọ bụ nanị ụdị atọ nke osisi a ka a maara.
N'ihi àgwà ndị a na-achọ mma, enweghị nchekasị na nlekọta nke nlekọta, njedebe dị oke mma na ịgha ubi. Mma a na-adọta n'ile anya ma n'oge okooko na mgbe ọ na-anọghị ya. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi ịkọ osisi, ilekọta ya ga-abụ ezigbo obi ụtọ.
Clivia mara mma
Ọnọdụ kacha mma maka na-eto eto Kaffir lily n'ime ụlọ
Atụmatụ maka oge ntoju na oge okooko
Ịgbara na mmiri
Mgbe na otu esi esi nri
Atụmatụ na oge ezumike
Mepee ụzọ ndị a na-emegharị
Mee ka ịzụlite ụmụ gị n'ụlọ
Clivia nke osisi
Nsogbu ndị nwere ike ịdaba na njedebe
Clivia adịghị oge ntoju
Ụdị ọdịdị dị iche iche nke na-emepụta n'ụlọ floriculture
Clivia bụ ifuru pụrụ iche nke na-ejikọta okooko osisi na-acha uhie uhie na ọgaranya nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ nke na-eto na n'akuku 180 Celsius, na-eme ụdị pyramid. Ọ na-etolite na-amalite nwayọọ nwayọọ (5-10 iberibe n'elu oge okpomọkụ), ma ọ wụghị ha ogologo oge.
Clivia na-agba ọsọ maka ihe dịka otu ọnwa, na-emeghe buds ahụ, nke na-eme ka o yie ka osisi ahụ adịla ogologo oge.
Ụdị ahụ a na-achọ mma bụ osisi na-acha osisi, ebe ọ bụ na okooko ọhịa na-ebute ogo dị ukwuu. Ọ bụghị ụdị nile nke ịba uru dị mma maka ịmalite ụlọ, naanị ụdị ụfọdụ ga-adaba n'ime ime ụlọ ahụ.
Ị ma? Clivia na-echebe ndị a mụrụ n'okpuru akara nke Sagittarius. Ọ na-enyere aka ịnọgide na-enwe obi ụtọ ma na-echebe ya pụọ ​​na nhụjuanya.
Aha Latin bụ Clivia Gardenii. Ọ na-etolite ruo ọkara mita n'ịdị elu, nwere akpụkpọ anụ, eriri akpụkpọ anụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, kwuru na nsọtụ. Ọ na-acha na nkera nke abụọ nke oyi na-acha ọbara ọbara hey, zukọtara nche anwụ inflorescence. Pedicle rute elu nke 50 cm.
Ụdị kachasị mma nke ejiri mara mma. Aha nke abụọ nke ifuru a bụ Miniat Clivia, n'asụsụ Latin Clivia Miniata. Mgbe ifuru na-ezu ike, ọ gaghị ekwe omume ịmata ọdịiche ya site na mma mara mma - ya epupụta nwekwara ụdị belt, agba ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na ogologo 70 cm.
Ọdịiche dị iche iche mgbe Clivia cinnabar blooms - ya okooko osisi na-acha uhie uhie-oroma, na petals bụ acha na isi. Ụdị a na-agba ọsọ na February na May ma bụrụ ihe ruru 20 okooko osisi na peduncle. Ọ bụ obodo cinnabar nke ghọrọ ihe ndabere maka ịzụlite ụdị ọhụrụ nke osisi a mara mma.
Aha Latin bụ Clívia Nobilis. O nwere otu eriri dị ka belt, naanị ogologo ha dị mkpirikpi - 40 cm.Mgbe okooko osisi, tụfuo obere ọkara mita nke na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, nke a na-anakọta site na 30-60 ibe na inflorescence. Petals na-adi nma n'omume di iche na ntuziaka. Oge ezumike - ọkara nke oge oyi.
Na mgbakwunye na okooko osisi ndị mara mma ma ọ bụ ndị na-enweghị atụ, ogologo ndụ nke ugwu nwere ike ịpụta na ọ bụ uru nke njedebe. Ọ bụrụ na ị maara ihe niile gbasara ịba uru ma na-elekọta onye na-elekọta ndị a, mgbe ahụ ị nwere ike ịmasị ya maka ihe karịrị afọ iri.
Akpa, i kwesiri icheta Clivia na-achọ ìhè na-egbukepụ egbukepụ ma na-enweta ìhè anyanwụ kpọmkwem.
Window dị n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ọwụwa anyanwụ kacha mma. Ọ bụrụ na ị na-etinye ifuru na akụkụ ndịda, ị kwesịrị ị na-elekọta ya shading. A gaghị atụ aro ka ịdobe ihu igwe dị n'akụkụ ugwu - ọ ga-eto ngwa ngwa ma ghara ịbịa oge ọ bụla.
N'oge okpomọkụ, ọ dị mma ka ikpughe ụlọ ahụ na ikuku dị elu: na mbara ala ma ọ bụ mbara ihu, ma echefula banyere anyanwụ nchebe.
Ọ dị mkpa! N'oge okooko na mmepe nke buds, ma ọ bụghị ịmịnye ya ma ọ bụ ịkwanye ite ọ gaghị ekwe omume - osisi ahụ ga-amalite ịwụsị akwụkwọ ya. Ọ bụrụ na e megharia ohia ahụ, ịkwesịrị itinye ya na ọkụ site na otu akụkụ ahụ n'otu ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche otu esi eme ka oge ntoju na-amị mkpụrụ n'ụlọ, mepụta okpomọkụ kwesịrị ekwesị maka ya. N'oge oge nke ibu ọ kwesịrị + 20-25 Celsius C, na site n'oge mgbụsị akwụkwọ ka mmiri - + 12-14 Celsius C. Mgbe okpomọkụ na-ada, osisi ahụ na-abanye n'ime oge ezumike ma tinye buds maka oge ọzọ.
Ozugbo mmalite peduncle pụtara, a ga-ebuli elu okpomọkụ ruo 18-20 Celsius C.
Ọ dị mkpa! Nnukwu na okenye osisi, oge fọdụrụ ọ ga-aba.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịkwado ifuru a n'ụlọ gị, cheta na Clivia chọrọ ala pụrụ iche, gụnyere akwụkwọ, ala sod na ájá, ihe ndị ọzọ na-elekọta n'ụlọ bụ ezi nri na ịgbara. Ọ bụ ihe na-achọsi ike na mmiri dị ezigbo mma, nke a ga-eji dị ka pebbles nke oké osimiri.
Clivia anaghị achọkarị ikuku nke ikuku, Otú ọ dị, ịdị ala dị ala n'oge oyi na enweghi ọkụ na-eduga n'eziokwu na osisi ahụ na-apụ ngwa ngwa.
A ghaghị ịmecha mkpụrụ maka ọgwụ ọcha, kama iwelie iru mmiri. Achịcha na epupụta nwere ike ehicha ya na akwa ákwà mmiri.
Clivia chọrọ kwesịrị ekwesị atọ - na ngafe nke mmiri, na mgbọrọgwụ amalite adiahade, na akpati ma doo - na-eto eto aja aja. Maka ogbugba mmiri, odi nkpa iji di iche iche, obughi mmiri siri ike. Agbara dị mkpa mgbe ị na-ehichapụ ala elu ala, na mmiri na-ekpuchi si na pan ga-awụ.
Mgbe osisi ahụ wepụtara okpokoro na ruo mgbe okooko osisi na-eto eto, ọtụtụ ugboro nke atọ na-amụba. Mgbe ala ahụ na-acha, a na-ebelata mmiri. N'oge dormancy, ifuru na-adịghị mkpa ịgbara - otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ọnwa zuru ezu iji mee ka epupụta ghara ihicha.
N'oge oyi, i kwesịrị inyocha ala nke epupụta - agba na ike. Ọ bụrụ na ịchọta mgbanwe, jiri nlezianya nyochaa osisi ahụ iji chọpụta ihe mere atụmatụ nke ịmalite na-acha odo odo. Ọ bụrụ na ị chọpụtaghị ihe ndị na-asọ oyi, hichaa ala.
Ị ma? N'ala nna, a na-eji cleavia eji agwọ agwọ.
Site n'afọ mbụ nke ndụ, site na mmiri ruo n'ọnwa August, ọ bụ ihe amamihe dị na iji fatịlaịza na clique. Iji mee nke a, jiri nchịkọta anụ ma ọ bụ zuru ezu na-agbakwunye ugboro abụọ n'ọnwa. Ọ bụ ihe amamihe dị na fatịlaịza ọzọ. N'oge oge ezumike, ọ dịghị mkpa ịzụ clique.
Ọ bụrụ na ị kpebie iji nri fatịlaịza mere, ị ga-ahọrọ maka bulbous na osisi okooko osisi. N'otu oge ahụ, ndị na-ese onyinyo na-akwado ibelata ịta nke egosi na ntuziaka ahụ.
A na-etinye nri ndị mgbagwoju anya na mmiri maka ogbugba mmiri.
A gwara ndị florists ọkachamara ka hazie oge ezumike maka ụlọ na-emechi - wintering. E nwere otu oge ụfọdụ iwu maka nlekọta nke blooming mgbe okooko
Ná mmalite nke mgbụsị akwụkwọ, ọ dị mma ịkwanye ite na osisi ahụ dị jụụ, ebe okpomọkụ ya ga-adị 7-12 Celsius. Na mmalite nke ihu igwe oyi, a laghachiri ya n'ime ụlọ ebe ọ ga-anọ n'oge oyi.
Maka osisi na-eto eto zuru ezu ọnwa abụọ zuru ezu. Maka ndị okenye, oge fọdụrụ ga-adịte aka - ruo mgbe March, mgbe akụ ifuru na-amalite ịmalite. Ọ bụ ihe na-adịghị mkpa na mmiri ma na-eri nri ahụ na oge ezumike. Lily na-egosi enweghị mmiri site na idobe epupụta.
Ọ dị mkpa! Inye nri n'oge oge ezumike ga-agwụ ike niile agha, ma ọ pụdịrị ịnwụ.
Mgbe oyi na-adọrọ adọrọ, lily na-agba ogologo ogologo ma baa ọgaranya.
Ndị na-eto eto dị mkpa na a ga-ebugharị ha kwa afọ, ebe ha na-amụba n'ike n'ike. A ghaghị igbanwe osisi ndị toworo eto n'okwu ahụ mgbe mgbọrọgwụ adịghị adaba n'ite - na-emekarị kwa afọ 2-3. A na-emegharị ya mgbe njedebe gafere.
Ọ bụ ezie na Clivia na-enwe ndidi ọbụna n'ọnọdụ ọjọọ, ntụgharị ya bụ nrụgide maka ya. Ya mere, ọ dị gị mkpa iji nlezianya na-agbaso iwu nke transplantation nke osisi.
Ala maka nchikota kwesiri ibu uzo achoro, ihe ndi ozo n'adighi nma. Ihe kacha mma:
turf - 2 akụkụ;
peat - 1 akụkụ;
humus - 1 akụkụ.
Maka obere okooko osisi, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgbakwunye perlite ma ọ bụ ájá ájá - akụkụ 1 ruo n'akụkụ abụọ nke sod ma ọ bụ ahịhịa ala.
Okpokoro a na-emeghe kwesịrị ịdị ntakịrị - mgbọrọgwụ kwesiri ịgbatị ya. Iji hụ na ventilash kwesịrị ekwesị na drainage n'ime ite ahụ, a ghaghị inwe oghere drainage.
Ogo nke ite ahụ maka ntụgharị nke ọ bụla ga-abụ 2-4 cm karịa nke gara aga.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na a kụrụ agụba n'ime ite dị egwu, ọ ga-amị mkpụrụ ma ọ bụ na ọ dịghị oge ntoju ma ọlị.
Iji gbochie mmiri, a ghaghị itinye drainage n'ime ala nke ite ahụ, a ga-etopụkwa olu olu ya n'elu mgbe a na-atụgharị ya (iji gbochie epupụta site na rotting).
Mgbe mgbe, mgbe a na-atụgharị ya, mgbọrọgwụ nke njedebe mebiri emebi, ya mere, ọ dị mkpa ka a fesa ebe ndị dị na crest na carbon powder ma ọ bụ ntụ, ma na-aṅụ mmiri ozugbo a naghị emegharị ya n'ọnọdụ a, ebe usoro mgbọrọgwụ ga-amalite ire.
A naghịzi ebugharị nnukwu okooko osisi, ha na-eme ka okpukpu ahụ dị elu kwa afọ.
Dị ka ọtụtụ lilies, a na-agbasa mkpụrụ na mkpụrụ osisi vegetative.
Ọ bụghị usoro kachasị esi emepụta nke ezinụlọ na ụlọ, n'ihi na ọ dị irè. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eji ya eme ihe nke ọma.
Iji nweta osisi ahụ, a na-emetọchasị blooming cleavia site na iji obe. Ọ bụrụ na mmetọ ahụ na-aga nke ọma, ovary na-acha akwụkwọ ndụ ga-apụta. Mgbe ọ na-eto, beri na-aghọ ọbara ọbara ma na-adị nro.
A na-etolite mkpụrụ osisi lily Kaffir site na October ruo Eprel. A na-akụ mkpụrụ n'ime akpa na mkpụrụ osisi (peat, ájá, turf) n'ebe dị anya nke 2 cm site na ibe ya. Mkpụrụ osisi ga - apụta nanị mgbe ọnwa isii gachara.
Mgbe mkpụrụ osisi ahụ tolitere ma malite ịmịpụta akwụkwọ, a na-atụgharị ha n'ime obere (7 cm nke dayameta) iche iche. A na-emegharị ya n'oge na-aga n'ihu. N'afọ abụọ gara aga, ite maka transplanting kwesịrị 3 cm ibu karịa ndị gara aga. Ịnwere ike ịgbakwunye mkpụrụ akụkụ nke humus.
Mgbe afọ abụọ gasịrị, malite n'oge mgbụsị akwụkwọ, a ghaghị iji oge ezumike na-enye ifuru ahụ, ebe ọ bụ na obodo malitere ịmalite n'afọ nke atọ ma ọ bụ anọ nke ndụ.
Ụzọ kachasị mma nke na-eto eto na-emepụta bụ mmeputakwa ụmụ. Ha na-ekewapụ site na nne osisi n'oge ha nwere 4-5 epupụta. N'iji ntụpọ nke mgbọrọgwụ, ọ bụla mmebi kwesịrị izere.
Ọ dị mkpa! N'ọnọdụ ọ bụla a gaghị ekewapụta omepụta n'oge okooko.
Maka Ome ndị na-eto eto, a na-ahọrọ akpa ahụ ka ọ ghara ibu 7 cm n'obosara. Mgbe nwa okoro na-eto eto na-agbanwe ma na-agbasiwanye ike, enwere ike ịmalite ịbanye n'ime ala maka njedebe. Okooko osisi ga-amalite na afọ 2-3.
N'ihi nsogbu nlekọta na-ekwesịghị ekwesị maka nsogbu ndị dị na clevia pụrụ ibilite. Ka ifuru na-atọ ụtọ mma ya, anyị na-akọwa ihe ndị bụ isi nke nlekọta ọjọọ, ihe kpatara na ụzọ isi dozie nsogbu.
Ọtụtụ ndị na-ejikarị mmiri mmiri na-ata ahụhụ, nke na-eme ka ọ gbanye mgbọrọgwụ ma nwee mgbaàmà na-egbu mgbu. Na mmiri na-ezighi ezi, ọkpụkpụ ifuru nwere ike ịdị mkpụmkpụ.
Ọ bụrụ na oge maka Kaffir lily ka oge ntoju abịa, ma ọ dịghị oge ntoju, mgbe ahụ oge fọdụrụ dị mkpụmkpụ maka ya. N'okwu a, ọ dị mkpa inye osisi ahụ na ezumike zuru ezu, tinye ya n'ime ụlọ dị jụụ.
Clivia akwụsịla oge ntoju ma dị elu ma ọ bụ ìhè dị ala. Ha na - alụso nsogbu a ọgụ na - agba - usoro okpomọkụ dị mkpa maka oge a ka e kere ma kpughee ìhè.
Ihe ọzọ kpatara enweghi okooko nwere ike ịbụ ụfe nitrogen. Na nke a, a naghị ewepụta nri fatịlaịza, a na-ejikwa mmanụ aṅụ ma ọ bụ nri ndị na-emepụta nri.
Ị ma? A kpọrọ Clivia ka Duchess nke Northumberland Charlotte Clive.
Ọ bụrụ na ọdịda ala akọrọ, nke a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri na-asọ oyi. Iji chekwaa osisi ahụ, ịkwesịrị ịgbanwe mkpụrụ ahụ ma debe fatịlaịza ahụ, mgbe ị bepụsịrị mgbọrọgwụ ahụ ma kpochapụ akụkụ ahụ.
Clivia nwere ike imeghachi ya na akwụkwọ edo edo ka a na-atụgharị ya. Iji dozie ọnọdụ ahụ, ọ dị mkpa iji mmiri gbanye osisi ahụ na mgbakwunye na ntakịrị tụlee mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ (dịka ọmụmaatụ, "Kornevin").
Mmiri ezughị ezu nwekwara ike imetụta agba nke epupụta. N'okwu a, ọ dị mkpa ịkwado ọchịchị na-agba mmiri ma hụ na bọl ụrọ anaghị akpọnwụ.
Ihe ọzọ mere epupụta nke ntinye nwere ike ime ka edo edo bụ enweghị ihe oriri. Ihe niile dị mfe - a ghaghị ịsọpụrụ ọnọdụ nri.
Na nlekọta kwesịrị ekwesị, Clivia enweghi ike ịrịa ọrịa, ma mgbe ụfọdụ, ọ ka na-ebute ọrịa.
Ọrịa kachasị mma nke njedebe bụ ire ere. Iji kpasuo ihu ya nwere ike ịkwa iko. E gosipụtara ire ere aja aja na epupụta. A pụrụ ịkwagharị ya n'ime ite ọhụrụ na ala disinfected, mgbe o wepụsịrị mgbọrọgwụ emetụta ma na-emeso ha site na ịrụ ọrụ carbon ntụ ntụ.
Mgbe mealybug na-egosi, a na-ehichapụsị akwụkwọ ndị na-emepụta ihe na-acha ma ọ bụ ákwà e ji mmanya na-egbu ma ọ bụ ihe ncha na ụtaba mee.
Pests nwere ike na-awakpo cleavia, nke kasị dị ize ndụ nke a na-atụle:
Iji merie pests ndị a mkpa, ma wepụ ebe ndị mebiri emebi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ naghị esiri ike ilekọta cleavia. Otú ọ dị, a ghaghị iburu ọtụtụ nuances ka i wee nwee ike ịmepụta ihe mara mma a.